Kedu ka esi eto tomato n'ime ubi gị
N'agbanyeghị otú akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ndị mara mma si eleba ụlọ ahịa anya, ngwaahịa ndị toro aka aka ha ga-adọrọ mmasị. N'ezie, ị maara na mkpụrụ osisi adịghị edozi ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ na kemịkal adịghị. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite, dịka ọmụmaatụ, tomato n'ime ubi gị, mgbe ahụ ọ gaghị abụ ihe na-ewe oge.
"Ndị bi" nke North: cucumbers na Siberia
Tupu ịzụta ngwugwu ọzọ na mkpuru osisi cucumbers, ọ dị gị mkpa iji nlezianya nyochaa ihe ndị dị iche iche. E kwuwerị, ọ bụghị osisi ọ bụla ga-enwe ike iguzogide ihu igwe Siberia na-adịghị ala ala. Banyere cucumbers, omenala a hụrụ ìhè na okpomọkụ dị ukwuu. Ma ozuzu nke oge a emewo ngwa ngwa n'ihu na e kere ọtụtụ ụdị nke onye nnọchianya a nke ezinụlọ ugu, nke nwere ike iguzogide mgbanwe ọ bụla n'ọnọdụ ihu igwe ọbụna na mpaghara dị ka Siberia.
Ọrụ ebube dị iche iche: ụdị tomato kukumba
Ọ bụrụ na i meela cucumbers, ya bụ, ịchọ ụdị dị iche iche maka atụmatụ gị, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ okwu ahịrịokwu dịka "kukumba kuki". Nke a abụghị otu ụdị dịgasị iche iche, ọ bụ mkpụrụ ego zuru ezu, mkpụrụ ya nwere ihe abụọ, ya bụ, ọdịdị mara mma na ogologo 50 - 80 cm.
Ural Zelentsy: kukumba kacha mma maka Urals
N'oge ahụ, a na-esi na mba dị iche iche zụọ ọtụtụ cucumber dị iche, onye nnọchianya nke ezinụlọ ugbo. Ọbụna onye na-elekọta ubi na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na-eto eto ihe ubi a nwere ike ịbanye na ụba mkpụrụ a. Kedu ihe anyị nwere ike ikwu banyere ndị na-amateurs ma ọ bụ ndị malitere ịzụlite ihe oriri a.
Ụyọkọ cucumbers: ihe ọ bụ na ihe a na-eri ya
Ndị na-akọ ubi na ndị na-elekọta ubi na-akọ na cucumbers ruo ọtụtụ afọ nwere ike ịma nke ọma cucumbers. Aha nke otu a dị iche iche pụtara dị ka ihe kachasị mma nke cucumbers ndị a. Nke a bụ ikike nke osisi iji mepụta otu node karịa otu ma ọ bụ abụọ ovaries n'otu oge.
Anyị na-eto cucumbers na windowsill: ndụmọdụ bara uru
O siri ike ugbu a ịchọta ụlọ ebe enweghị windo-okooko osisi na windo windo. Ha na-agbakwunye ụlọ nkasi obi, na-emekwa ka ọnọdụ ikuku dị mma. Ma na-eto eto n'ụlọ ị nwere ike ọ bụghị naanị dragon, violets ma ọ bụ dieffenbachia. N'ihi na ụdị ozuzu a bara uru ọbụna cucumbers. Nke a abụghị usoro mgbagwoju anya, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-akụ ihe ọkụkụ maka afọ.
Ịnye cucumbers esi arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi
Onye ọ bụla na-elekọta ubi anụwo banyere usoro nke iburu cucumbers na uru ya. Ka anyị kwuo banyere esi tuo cucumbers n'ọhịa na griin ha, na ihe mere usoro cucumbers ji dị mkpa. Esi na-eme ka ụmụ ahụhụ cucumbers bu nje. Ụmụ ahụhụ na-akpọ kukumba, nke mkpụrụ osisi na-eto naanị ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ma ọ bụ ụmụ mmadụ.
Otú e si emeso ọrịa cucumbers
Onye ọ bụla na-eri nri ihe oriri na-eche ọrịa na pests nke akwukwo nri n'ubi. Ọ bụ otu ihe mgbe ọ na-eme n'ihi nlekọta na-adịghị mma, na ihe ọzọ mgbe osisi ahụ na-arịa ọrịa n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Isiokwu a ga-atụle otu esi echekwa cucumbers si ọrịa na pests. Ọtụtụ mgbe, ọrịa ọrịa kukumba na-akpata nlekọta na-ekwesịghị ekwesị.
Tomato Jam: Ihe kacha mma maka Tomato
Taa, a na-ahụ tomato n'anya ma na-aghọta ya site na nri niile nke ụwa. Na efere naanị ya anaghị eji ya, ozugbo ọ naghị ebute ya. Nke a marinades, na pickles, tomato, kvass na vyalyat. Ma, ọ bụghị mmadụ niile na-atọ ụtọ jam nke mkpụrụ osisi ndị a dị ebube. Cherry Tomato Jam Efrata: Cherry Tomato - 1 n'arọ Sugar - 450 g Lemọn - 1 PC.
Kedu ka esi ghaa tomato maka oyi, ọtụtụ ntụziaka
Mkpụrụ tomato a kụrụ akpụ bụ akụkụ dị mkpa nke nri anyị. Ha na-enwe obi ụtọ iri nri na n'oge ezumike, nakwa na tebụl kwa ụbọchị. Nwanyị ọ bụla na-anụ ọkụ n'obi nwere ntụziaka kachasị amasị ya maka tomato na-agbagharị maka oyi. Nri nke tomato mkpọ nwere ike dị iche - nkọ, ụtọ, utoojoo. Ihe niile na-adabere na ngwa nri na oge ndị agbakwunyere marinade.
Otu esi emeso blight na tomato, na-egbochi tomato na ezumike ha n'oge okpomọkụ
Mgbe ha hụrụ ihe ịrịba ama nke phytophtoras na saịtị ha, onye ọ bụla na-elekọta ubi malitere ịmalite mkpu. N'okwu ahụ, anyị ga-akọ banyere ihe niile metụtara ọrịa ahụ na otu esi alụ ọgụ na tomato na griin ha nakwa n'ọhịa. Kedu ihe bụ phytophtora: akpata na ihe ịrịba ama nke ọrịa Ọ bụrụ na ị zutere phytophtora ma amaghị ihe ọ bụ, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na ị gbalịrị ịmalite tomato na ubi gị.
Ihe nzuzo nke na-eto eto ma na-elekọta tomato seedlings
Tomato bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị kasị ewu ewu. Enweghị ha, ikekwe, enweghị ike ime n'ugbo ubi ọ bụla. Akwụkwọ nri dị ezigbo ụtọ, dị mma maka owuwe ihe ubi maka oyi ma nwee ọtụtụ ihe bara uru. Ọtụtụ mgbe, ịzụta seedlings nwere ike ịdighi ike ma ọ bụ ghara ịdekọ na ụdị dị iche iche nke ịchọrọ ịzụta.
Kedu ka tomato cherry si baa uru?
Tomato tomato sitere na tomato dị iche iche, na-achakarị ọbara ọbara, ọ bụ ezie na ọ dị iche iche na-acha odo odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọbụna oji. Mkpụrụ ndị ahụ na-adịkarị obere (10-30 g), ma ha na-ahụkwa nha nke bọl golf. Ụdị ahụ dịgasị iche site na ntụgharị dị elu. A na-eji tomato mee ihe dị ka nri, mma maka efere, gbakwunyere salads, mkpọ na ọbụna amịrị.
Ụzọ dị iche iche na-eto eto na cucumbers
Ọtụtụ ndị na-eto eto na-echekarị otú ha ga-esi akụ osisi tomato, mkpụrụ osisi, na akwụkwọ nri na obere mpaghara ma n'otu oge ahụ ihe ubi. Anyị na-enye gị ụfọdụ ụzọ dị mma ịkụ kukumba. Ị ma? Ala nna nke cucumber nkịtị bụ ebe okpomọkụ na ebe ndị dị ala nke India, ụkwụ nke Himalaya, ebe ọ ka na-etolite n'ọnọdụ ndị mmadụ.
Ghọta cucumbers kachasị mma maka mbara ihu ahụ
Ị nwere ike detụ ụtọ cucumbers ma ọ bụrụ na ihe onwunwe enweghị oke ala, ma ọ bụ dacha. N'ọnọdụ dị otú ahụ, nanị nzọpụta ga-abụ ụdị cucumber maka mbara ihu ahụ, nkọwa nke ihe kachasị ewu ewu nke anyị ga-eme ọzọ. Eprel Nke a dịgasị iche iche bụ ịmalite ụtụtụ, nke na-eme ka o kwe omume ịhụ na osisi nke osisi a nke mbụ ovaries nke mkpụrụ osisi n'ime ọnwa 1.5 mgbe ntuputara Ome.
Otu esi echebe osisi melotriya ma obu obere kukumba
Metotria bụ osisi sitere n'Africa, ọ nwere mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ ma na-aghọwanye ndị na-ewu ewu na ọdịbendị anyị n'etiti ndị hụrụ ọdịbendị dị iche iche. Mkpụrụ anụ kukumba: nkọwa nke osisi Melodia siri ike bụ nke ugu ezinụlọ, na mkpụrụ osisi na oriri na akwụkwọ nri. Osisi nwere liana-dịka ị ga-esi karịa mita atọ n'ogologo, akwụkwọ ndị ahụ dị ka kukumba, na-eme ka ọdịdị ya dị mma, ma na-enweghị kukumba.
Mgbanwe nke ubi nke ihe ubi akwukwo nri: ihe aghagha ihe mgbe obula, otua esi emeputa ihe ubi n'uzo ziri ezi
Onye ọ bụla na-adị ndụ n'oge okpomọkụ maara nke ọma na ọ bụrụ na ọtụtụ afọ n'usoro, ha na-akụ otu ihe ahụ n'otu ebe, mgbe ahụ ọbụnadị na ọnọdụ nlekọta yiri nke ahụ, ha na-adịwanye njọ kwa afọ na mkpụrụ osisi. Nke a na - akpata nsị ala, nke, n'aka nke ya, kpatara ọtụtụ ihe.
Ụzọ iji chekwaa cucumbers maka oyi: otu esi eme ka cucumbers dị ọhụrụ
Ọkụ ọhụrụ, crispy cucumbers na nchịkọta zuru ezu nke vitamin ga-enwe mmeri n'elu nhọrọ mkpọ. N'ụzọ dị mwute, na nchekwa na-ezighi ezi, kukumba ọhụrụ amalite ịmalite ngwa ngwa. Nanị ụzọ ọ ga-esi apụ bụ ịkụ akwụkwọ nri ozugbo o kwere omume mgbe ha dị ọhụrụ, ma ọ bụ ịchọta ụzọ ọzọ ị ga-esi chekwaa ha.
Yiri n'elu mgbakwasa maka cucumbers: esi tuze mmanu akwukwo nri
Kukumba, dị ka osisi ọ bụla ọzọ, chọrọ fertilizing mgbe niile. Na omenala, a na-etinye mmanụ ma ọ bụ ihe oriri na-edozi ahụ. Ụfọdụ na-ahọrọ ịzụta ha na ụlọ ahịa, ndị ọzọ - ime ya n'onwe gị. N'okwu ikpeazụ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ kpọmkwem ihe ndị ahụ osisi gị na-enweghị maka oge mmepe a.
Ihe nzuzo nke na-eto cucumbers na akpa
Ọ ga-eju ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-agụ banyere echiche dị otú ahụ maka ịkụ kukumba. Otú ọ dị, ịzụ cucumbers na akpa bụ ụzọ dị iche iche nke ọhụrụ ga-esi zọpụta ohere n'elu akwa ahụ, ma nweekwa ihe ubi bara ụba nke cucumbers mara mma ma dị ụtọ. N'isiokwu a, ị ga-amụta otú ị ga-esi kụrụ cucumbers na akpa, na usoro nke ịgha mkpụrụ site na nkwụsị.